ट्राफिक – Himalaya Television
ट्राफिक जरिवाना अब अनलाइनबाटै गर्न सकिने
२७ चैत २०७७ काठमाडौं । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेबापत तिर्नुपर्ने जरिवाना सहज तरिकाले अनलाइनमार्फत भुक्तानी गर्न सक्ने प्रणालीको विस्तार गरेको छ । महाशाखाले आजफोन पे प्रा.लि. र नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेडसँग सम्झौता गरी सेवाग्राहीले आफ्नो...
ई-रिक्सा बढ्दै जाँदा ट्राफिक ब्यवस्थापनमा चुनौती (भिडियो रिपोर्टसहित)
१७ चैत २०७७ काठमाडौं । व्यापारिक तथा आर्थिक राजधानीको रुपमा विकास भइरहेको बुटवलमा ट्राफिक जामको समस्या बढ्दै गएको छ । मुख्यत ई–रिक्सा बढ्दै जाँदा ट्राफिक ब्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ । दुर्घटना पनि बढ्दै गएको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाले कार्यविधि...
महाशिवरात्रि पर्वः भोलि कतै निस्कँदै हुनुहुन्छ ? यस्तो छ परिवर्तित ट्राफिक रुट
२६ फागुन २०७७ काठमाडौं । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले महाशिवरात्री पर्वका अवसरमा पशुपतिनाथ क्षेत्रमा हुने भिडभाडलाई मध्यनजर गरी ट्राफिक व्यवस्थापन मिलाएको छ । पशुपति क्षेत्रमा पूजाआजा गर्न आउने भक्तजन एवम् दर्शनार्थीको भिडभाडलाई मध्यनजर गरी सहज आवतजावतको प्रबन्ध मिलाउन रुट...
उत्कृष्ट काम गर्ने ट्राफिक प्रहरी सम्मानित (भिडियो रिपोर्टसहित)
१६ फागुन २०७७ काठमाडौं । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले उत्कृष्ट काम गर्ने ट्राफिक प्रहरीलाई सम्मान गर्न थालेको छ । ट्राफिक प्रहरीले नागरिकलाई गर्ने व्यवहार राम्रो होस् भन्ने उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रम शुरु गरिएको महाशाखाले जनाएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत फिल्डमा...
ट्राफिक प्रहरीले हराएका मोटरसाइकल खोजेर सम्बन्धित धनीलाई बुझायो (भिडियो रिपोर्टसहित)
२७ माघ २०७७ काठमाडौं । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले हराएका २५ वटा मोटरसाइकल खोजेर सम्बन्धित धनीलाई बुझाएको छ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले आज कार्यक्रम नै गरेर मोटरसाइकल हस्तान्तरण गरेको हो । उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट हराएका मोटरसाइकल बालाजु, टोखा,...
आजबाट अनलाइन प्रणालीबाटै ट्राफिक नियम उल्लंघनको जरिवाना तिर्न सकिने
२१ माघ २०७७ काठमाडौं । आजबाट अनलाइन प्रणालीबाटै ट्राफिक नियम उल्लंघनको जरिवाना तिर्न सकिने भएको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले आजदेखि अनलाइनबाटै जरिवाना तिर्न सकिने गरी नयाँ सफ्टवेयर कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो। यो अनलाइन सेवाको आजै औपचारिक उद्घाटन हुँदै...
उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनमा स्वयंसेवक परिचालन गरिने
१३ माघ २०७७ काठमाडौं । उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन सहज बनाउन ट्राफिक स्वयंसेवक परिचालन गरिएको छ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा र नेपाल स्काउटको सहकार्यमा नेपाल स्काउटका एक सय जना युवालाई ट्राफिक स्वयंसेवक बनाएर परिचालन गरिएको हो । कमजोर ट्राफिक...
ट्राफिक सचेतनाका लागि ‘सांगीतिक डमी अभियान’ शुरु
२२ कात्तिक, २०७७ काठमाडौं । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले ट्राफिक सचेतनाका लागि ‘सांगीतिक डमी अभियान’ शुरु गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न चोकमा राखिएको डमीमा ट्राफिक नियम सम्बन्धि विभिन्न गीतहरु बजाएर ट्राफिक नियमको बारेमा जानकारी दिइने छ । ट्राफिक...
ट्राफिक नियम तोड्नेलाई आर्थिक जरिवाना बढाउनुपर्छः आइजीपी थापा (भिडियोसहित)
१८ कात्तिक, २०७७ काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक शैलेस थापा क्षेत्रीले जानी जानी ट्राफिक नियम तोड्नेलाई आर्थिक जरिवाना बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । गृहमन्त्रालयमा भएको कार्यक्रममा महानिरीक्षक थापाले आर्थिक जरिवानाको व्यवस्था बढाउन सुझाव दिनुभयो । लाइसेन्स वितरणमा पनि कडाई गर्नुपर्ने महानिरीक्षक...
यस्तो छ काठमाडौं उपत्यकामा ट्राफिक जाम र दुर्घटना कम गर्ने एकीकृत कार्ययोजना
१८ कात्तिक, २०७७ काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक जाम कम गर्न र सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ट्राफिक व्यवस्थापन सम्बन्धि एकीकृत कार्ययोजना २०७७ तयार भएको छ । ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख भीम ढकाल संयोजक रहेको समितिले एकीकृत कार्ययोजना तयार गरी...